နှလုံးနှင့် အသည်းအတွက် လူသိနဲတဲ့ ပဲလင်းမြွေသီး(ခေါ်)ဗုံလုံသီးရဲ့ ကျန်းမာရေးလျှို့ဝှက်ချက်များ – Suehninsi
ဗုံလုံသီးပင် (ဗုံလုံသီး (ခေါ်) ပဲလင်းမြွေသီး –)တို့သည် တစ်နှစ်ပတ်လုံးအသီးသီးသော အပင်ဖြစ်ကာ၊ အကြီးမြန်သော နွယ်ပင် တစ် မျိုးဖြစ်၏။ အပူပိုင်းဒေသတွင် ကောင်းစွာဖြစ်ထွန်းကြပြီး၊ မှန်ကူကွက်သစ်သားဘောင်ဖြင့် တိုင်ထူစိုက်ပျိုးပေးပါက၊ အပင်ဖြစ်ထွန်းမှု မြန်ဆန်ပါတယ်။ ဗုံလုံသီး တို့သည် အုပ်မိုးထားသော အရွက်များအောက်မှ တွဲလောင်းကျ၍ သီးခြင်းဖြစ်၍ အမှတ်တမဲ့ကြည့်ပါက မြွေနှင့်ခ ပ်ဆင်ဆင် တူ ခြင်း၊ အလွန်အမင်းအလျားလိုက်ရှည်ထွက်ကာ အသီးသီးခြင်း၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင်
အလျား လိုက် မရှည်ဘဲ အသီး၏ အဖျားစွန်း တစ်ဘက်မှ နောက်အဖျားစွန်းတစ်ဘက်ထိ မိမိကိုယ်ကိုခွေပတ်တွန့်လိမ်စွာ အသီးသီးခြင်း၊ အစိမ်းရောင်အသီးပေါ်တွင် အစိမ်း နုရောင် (သို့မဟုတ်) အဖြူရောင် အကြောင်အကျားများပါရှိခြင်း စသည်တို့ကြောင့်အချို့အရပ်ဒေသများတွင် ဗုံလုံသီး ကို ပဲလင်းမြွေသီးဟု ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။အသီးရင့်လာပါက၊ အထဲရှိအစေ့များလဲ ရင့်မာလာတတ်သဖြင့်၊ နုချိန်မှာခူးဆွတ် စားသင့်ပါတယ်။
အသီးသာမက၊ အရွက်ကိုလဲ ဟင်းချက်စားနိုင်ပါတယ်။ မလတ်ဆတ်သော အရွက်တွင် အလွန်စူး ရှသော အနံ့အသက် ဆိုးများထွက်ရှိ၏။ အသီး၏ အရသာ မှာ ချိုပေါ့ပေါ့အရသာရှိပါတ ယ်။ နု၍ လ တ်ဆတ်သောအသီးတွင် အရည်ဓာတ်မြောက်များစွာ ပါရှိသောကြောင့် အပူပေးချ က် ပြုတ်ရာ ၌ လျှင်မြန်စွာကျက်လွယ်၏။ ဗုံလုံသီး (ခေါ်) ပဲလင်းမြွေသီးကို ငါး၊ပုစွန် (သို့မဟုတ်) မိမိနှစ်သက် ရာ အသားတစ်မျိုးမျိုး တို့ဖြင့် အစာသွပ်ချက်၍သော်လည်းကောင်း၊ နှပ်၍သော်လည်းကောင်း၊ကြော်ချက် ၍
သော် လည်းကောင်း၊ အသီးနှင့်အရွက်နုတို့ကို ပြုတ်ကာ ငပိရည်အတို့အမြှုပ်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ အရွက်ကို ဟင်းချို/စွပ်ပြုတ်/ကြော်ချက် ချက်၍ သော်လည်းကောင်း၊ အမျိုး မျိုး ချက်ပြုတ်စားသောက်နိုင်ပါတယ်။ ဗုံလုံသီးနှင့်ကျန်းမာရေး – ဗုံလုံသီးထဲမှာ လူသားတို့အတွက် ကျန်းမာရေးကို ကောင်းကျိုးပြုတဲ့ ဗီတာမင် နှင့်သတ္တုဓာတ် တို့အမြောက်အများပါရှိလို့၊ အထူးသဖြင့် အိန္ဒိယရိုးရာ ကျေးလက်ကုထုံးများတွင် ဗုံလုံသီး နှင့် အရွက်တို့ကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုလျှက်ရှိ နေကြပါ တယ်။
ဆေးသုတေသီများ၏ ဓာတ်ခွဲ စမ်းသပ်ချက်မျာအရ၊ ၁၀၀ ဂရမ်ရှိသော ဗုံလုံသီးထဲတွင် ကယ်လိုရီ ၁၈၊ အစိုဓာတ် ၉၄.၆%၊ ပရိုငတ်း ဝ.၅%၊ အဆီဓာတ် ဝ.၃%၊ အမျှင်ဓာတ် ဝ.၈%၊ ကစီဓာတ် ၃.၃ %၊ ကယ်လ် စီယမ် ၂၆ မီလီဂရမ်၊ မီးစုန်း ၂၆ မီလီဂရမ်၊ သံဓာတ် ဝ.၃ မီလီဂရမ်၊ ကယ်ရိုတင်း ၉၆ မီလီဂရမ်၊ သီအာမင် ဝ.၀၄ မီလီဂရမ်၊ ရီဘိုဖလာဗင် ဝ.၀၆ မီလီဂရမ်၊ နီအာစင် ဝ.၃ မီလီဂရမ် တို့အသီး သီးပါရှိကြလို့ လူသားးတို့ကျန်းမာရေးကို များစွာ အထောက်အကူပြုစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဗုံလုံသီး သ်ည် ချွဲ၊ သလိပ်၊ ပြည် တို့ကို ပျော်စေနိုင်စွမ်းရှိပြီး၊ အဆုတ်နာ/တီဘီနာဝေဒနာ ရှင် များကို များစွာ ကောင်းကျိုး ပြုပါတယ်။ ဗုံလုံသီးပင် အရွက်ကလည်း ညချွေးထွက်လွန်ခြင်းနှ င့်အဆုတ် တီဘီရောဂါ တို့ကို
သက်သာစေပါတယ်။ ဗုံလုံသီးထဲတွင်ပါရှိသော ရေဓာတ် နှင့် သတ္တုဓာတ်များက၊ အရေပြားခြောက်သွေ့မှုကို သက်သာလျော့နည်းစေသည့် အပြင် ခန္ဓာကိုယ်၏ အရေဓာတ်ထုပ်လုပ်မှုကိုလဲများစွာ အထော က်အပံ့ပေးပါတယ်။အပူငြိမ်းကာ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းကို အေးမြစေလို့၊ ပူပြင်းသော နွေရာသီတွင် များများစားပေးသင့်ပါတယ်။ အသည်းကို လွန်စွာကောင်းကျိုးပြုပါတယ်။ ဗုံလုံသီးသည် နှလုံးအားကောင်းစေတဲ့အတွက်၊ နှလုံးဝေဒနာသည်များ စားပေးသင့်ပါ တယ်။ နှလုံးပုံမှန် အလုပ်မလုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့်နှလုံးခုန်မမှန်ှတော့ဘဲ ရင်တုန်ပန်းတုန်ဖြစ်လာ ပါက၊ ဗုံလုံရွက် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်များကို အရည်ညှစ်ပြီး စားပွဲတင် ဇွန်း (၁)ဇွန်း မှ (၂)ဇွန်း အထိ တစ်နေ့လျှင် ၃-ကြိမ် သောက်သုံးပေးရုံမျှဖြင့် နှလုံးကိုပြန်လည်၍ ပုံမှန် အလုပ် လုပ် လာစေနိုင်၏။
ကိုယ်ပူအပြင်းဖျားနာခြင်းတို့အတွက် ဗုံလုံသီး နှင့် အရွက်တို့က အသက်ကယ်ဆေးကဲ့သအား ကိုးလောက် ပါတယ်။ ဗုံလုံသီး နှင့်အရွက်တို့ကို ကျိတ်ချေ၍ ပျားရည်ဖြင့်ရောသောက်ေ ပးပါက၊ ဖျားနာခြင်းကို ယူပစ်သလို ပျောက်ကင်းစေ ပါတယ်။ ထို့ပြင်ဗုံလုံသီးအရွက် နှင့်နံနံပင်တို့ကို ၁၂ ဂရမ်စီ ဆတူရော၍ ရေအေးထဲတွင် တစ်ညစိမ်ထားပါ။ ထိုညသိပ် ရေကို အဖျားလုံးဝမကျနိုင်ဘဲ အပြင်းဖျားနာနေသည့် ဝေဒနာသည်များကို ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ လိမ်းကျံပေးနိုင်ပါတယ် ဗုံလုံသီးထဲတွင်ပါရှိသော အမျှင်ဓာတ်များက ကလူးကို့စ်ပမာဏကို ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ေ သာေ ကြာင့်၊ ဆီးချိုရောဂါ ကို ကျစေပါတယ်။ အထူးသဖြင့်
တရုပ်တိုင်းရင်းဆေးကုထုံးတွင် ဗုံလံသီးပင်၏အမြစ်ဖြင့် ဆီးချိုရောဂါကို ကုသလေ့ရှိကြ ပါတယ်။ဗုံလုံရွက်ကို နံနံစေ့နှင့်ရောကာ အပူပေးပြုတ်ထားသည့်အရည်ကိုတစ်နေ့လျှင် (၃)ကြိမ် ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့လိမ်းကျံပေး ခြင်းဖြင့် အသဲရောင်အသားဝါကို ကောင်းစွာကုသနိုင်ပါတယ်။8. ဗုံလုံသီးတွင် ရေဓာတ်ပါဝင်မှုများသောကြောင့် ကယ်လိုရီနဲသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖြစ် ပါတယ်။ဒါ့အပြင် ပြည့်စုံလုံ လောက်သောအာဟာရများကို ဖြည့်တင်းပေးနိုင်တာမို့ ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်ထိန်းလိုသူများအတွက် အထူးသင့်တော်ပါတယ်။ အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝစွာပါရှိလို့အစာချေစံနစ်ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ဝမ်းချုပ်ြ ခင်း အတွက် စိတ်မညစ်ပါနှင့်။ ဗုံလုံသီးသာမက၊ အရွက်၊ အမြစ် နှင့် အစေ့တို့ကလဲ အူထဲတွင်ေ ချာဆီအဖြစ် စွမ်းဆောင်ပေးကာ၊ ဝမ်းနူးစေပါတယ်။ လူကြီးဝမ်းချုပ်ခြင်းအတွက်၊ ဗုံလုံရွက်၊ အမြစ်နှင့် အစေ့တို့ကို ညက်ညက်ဝါးစား ပေးနိုင်ပါတယ်။
ကလေးငယ်များ ဝမ်းချုပ်ခြင်းအတွက်၊ ဗုံလုံရွက်နှင့်အစေ့တို့၏ သတ္တုရည်ကို နံက်တိုင်း လက်ဘက် ရည်ဇွန်း (၁)ဇွန်းစီ တိုက်ကျွေးေ ပးခြင်းဖြင့် ဝမ်းမှန်စေပါတယ်။ 10. ဦးရေပြားတွင် မှိုစွဲ၍ဗောက်ထသူများအတွက် ဗုံလုံသီးသတ္တုရည်ဖြင့် ဦးရေပြားကိုနှိပ်နယ်ေ ပးခြ င်းဖြင့် မိမိဖာသာ အိမ်တွင်းဆေးမြီးတိုအဖြစ် ဗောက်များကင်းစင်အောင်ကုသနိုင်ပါတယ်။ ဗုံလုံရွက်သတ္တုရည်ဖြင့် ဦးရေပြားကို လိမ်းပေး ရုံမျှဖြင့် ထိပ်ပြောင်ခြင်းကို
သက်သာလျော့နဲစေပါ တယ် ဗုံလုံသီးတို့သည် ဆီးများ၊ လေသက်စေကာ၊ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ အဆိပ်အတောက်များ ကို နှင်ထုတ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါ တယ်။အထူးသတိပြုရန် – (က) ဗုံလုံစေ့ဟာ ဝမ်းသက်စေတာမှန်သောလဲ၊ ထိုအစေထဲ့တွင် အဆီဓာတ်ပါဝင်မှုမြင့်မားလို့ လွန်ကဲစွာစားသုံးမိပါက အစာမကျေ ဗိုက်အောင့်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။( ခ) ဗုံလုံသီးပင်အမြစ်ဟာ ဝမ်းသက်စေလို့၊ ကိုယ်ဝန်သည်များ မစားသင့်ပါဘူး။ အဆင်မသင့်ရင် သားပျက်/သားလျော ဖြစ်စေ ပါတယ်။( ဂ) ဗုံလုံသီးနဲ့ပီလောပီနံ တို့တွဲမစားသင့်ပါဘူး။
အော့အန်တတ်ပါတယ်။မှတ်ချက် – ရင့်သောဗုံလုံသီးများသည် ခါးသက်သက်ဖြစ်ကာ၊ အရသာလဲမရှိပါ။ ဒါကြောင့် လတ်ဆတ်ပြီး နုသောအသီးများကို အရွေးမမှား ဘို့လိုပါတယ်။ဗုံလုံသီးအပါအဝင် ဟင်းသီးဟင်းရွက် နှင့် သစ်သီးဝလံ အားလုံးတိုင်းတို့တွင် သဘာဝမှရရှိေ သာ ဆေးဘက်ဝင်အစွမ်း သတ္တိ ကိုယ်စီပါရှိကြသဖြင့် လူသားတို့ကျန်းမာရေးကို များစွာအထော က်အပံ့ဖြစ်စေပါတယ်။ သို့သော် “တန်ဆေး၊လွန်ဘေး” ဆိုးရိုး စကားနှင့်အညီ ဘေးမဖြစ်ေ အာင်တော့ အသုံးချတတ်ဘို့လိုအပ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် လူသားတို့ကျန်းမာရေးကို သဘာဝ ပဋိ ဇီဝဆေးအဖြစ် အထောက်အပံ့ပေးသည့် ဗုံလုံသီးကို အကျိုးရှိရှိအသုံးချကာ စားသုံးနိုင်ကြပါေ စကြောင်း သတင်းကောင်းပါး အပ်ပါသည်။
ဗုံလုံသီးပငျ (ဗုံလုံသီး (ချေါ) ပဲလငျးမွှသေီး –)တို့သညျ တဈနှဈပတျလုံးအသီးသီးသော အပငျဖွဈကာ၊ အကွီးမွနျသော နှယျပငျ တဈ မြိုးဖွဈ၏။ အပူပိုငျးဒသေတှငျ ကောငျးစှာဖွဈထှနျးကွပွီး၊ မှနျကူကှကျသဈသားဘောငျဖွငျ့ တိုငျထူစိုကျပြိုးပေးပါက၊ အပငျဖွဈထှနျးမှု မွနျဆနျပါတယျ။ ဗုံလုံသီး တို့သညျ အုပျမိုးထားသော အရှကျမြားအောကျမှ တှဲလောငျးကြ၍ သီးခွငျးဖွဈ၍ အမှတျတမဲ့ကွညျ့ပါက မွှနှေငျ့ခ ပျဆငျဆငျ တူ ခွငျး၊ အလှနျအမငျးအလြားလိုကျရှညျထှကျကာ အသီးသီးခွငျး၊ တဈခါတဈရံတှငျ
အလြား လိုကျ မရှညျဘဲ အသီး၏ အဖြားစှနျး တဈဘကျမှ နောကျအဖြားစှနျးတဈဘကျထိ မိမိကိုယျကိုခှေပတျတှနျ့လိမျစှာ အသီးသီးခွငျး၊ အစိမျးရောငျအသီးပျေါတှငျ အစိမျး နုရောငျ (သို့မဟုတျ) အဖွူရောငျ အကွောငျအကြားမြားပါရှိခွငျး စသညျတို့ကွောငျ့အခြို့အရပျဒသေမြားတှငျ ဗုံလုံသီး ကို ပဲလငျးမွှသေီးဟု ချေါဆိုကွပါတယျ။အသီးရငျ့လာပါက၊ အထဲရှိအစမြေ့ားလဲ ရငျ့မာလာတတျသဖွငျ့၊ နုခြိနျမှာခူးဆှတျ စားသငျ့ပါတယျ။
အသီးသာမက၊ အရှကျကိုလဲ ဟငျးခကျြစားနိုငျပါတယျ။ မလတျဆတျသော အရှကျတှငျ အလှနျစူး ရှသော အနံ့အသကျ ဆိုးမြားထှကျရှိ၏။ အသီး၏ အရသာ မှာ ခြိုပေါ့ပေါ့အရသာရှိပါတ ယျ။ နု၍ လ တျဆတျသောအသီးတှငျ အရညျဓာတျမွောကျမြားစှာ ပါရှိသောကွောငျ့ အပူပေးခြ ကျ ပွုတျရာ ၌ လြှငျမွနျစှာကကျြလှယျ၏။ ဗုံလုံသီး (ချေါ) ပဲလငျးမွှသေီးကို ငါး၊ပုစှနျ (သို့မဟုတျ) မိမိနှဈသကျ ရာ အသားတဈမြိုးမြိုး တို့ဖွငျ့ အစာသှပျခကျြ၍သျောလညျးကောငျး၊ နှပျ၍သျောလညျးကောငျး၊ကွျောခကျြ ၍
သျော လညျးကောငျး၊ အသီးနှငျ့အရှကျနုတို့ကို ပွုတျကာ ငပိရညျအတို့အမွှုပျအဖွဈလညျးကောငျး၊ အရှကျကို ဟငျးခြို/စှပျပွုတျ/ကွျောခကျြ ခကျြ၍ သျောလညျးကောငျး၊ အမြိုး မြိုး ခကျြပွုတျစားသောကျနိုငျပါတယျ။ ဗုံလုံသီးနှငျ့ကနျြးမာရေး – ဗုံလုံသီးထဲမှာ လူသားတို့အတှကျ ကနျြးမာရေးကို ကောငျးကြိုးပွုတဲ့ ဗီတာမငျ နှငျ့သတ်တုဓာတျ တို့အမွောကျအမြားပါရှိလို့၊ အထူးသဖွငျ့ အိန်ဒိယရိုးရာ ကြေးလကျကုထုံးမြားတှငျ ဗုံလုံသီး နှငျ့ အရှကျတို့ကို တှငျတှငျကယျြကယျြ အသုံးပွုလြှကျရှိ နကွေပါ တယျ။
ဆေးသုတသေီမြား၏ ဓာတျခှဲ စမျးသပျခကျြမြာအရ၊ ၁၀၀ ဂရမျရှိသော ဗုံလုံသီးထဲတှငျ ကယျလိုရီ ၁၈၊ အစိုဓာတျ ၉၄.၆%၊ ပရိုငတျး ဝ.၅%၊ အဆီဓာတျ ဝ.၃%၊ အမြှငျဓာတျ ဝ.၈%၊ ကစီဓာတျ ၃.၃ %၊ ကယျလျ စီယမျ ၂၆ မီလီဂရမျ၊ မီးစုနျး ၂၆ မီလီဂရမျ၊ သံဓာတျ ဝ.၃ မီလီဂရမျ၊ ကယျရိုတငျး ၉၆ မီလီဂရမျ၊ သီအာမငျ ဝ.၀၄ မီလီဂရမျ၊ ရီဘိုဖလာဗငျ ဝ.၀၆ မီလီဂရမျ၊ နီအာစငျ ဝ.၃ မီလီဂရမျ တို့အသီး သီးပါရှိကွလို့ လူသားးတို့ကနျြးမာရေးကို မြားစှာ အထောကျအကူပွုစတေယျလို့ဆိုပါတယျဗုံလုံသီး သျညျ ခြှဲ၊ သလိပျ၊ ပွညျ တို့ကို ပြျောစနေိုငျစှမျးရှိပွီး၊ အဆုတျနာ/တီဘီနာဝဒေနာ ရှငျ မြားကို မြားစှာ ကောငျးကြိုး ပွုပါတယျ။ ဗုံလုံသီးပငျ အရှကျကလညျး ညခြှေးထှကျလှနျခွငျးနှ ငျ့အဆုတျ တီဘီရောဂါ တို့ကို
သကျသာစပေါတယျ။ ဗုံလုံသီးထဲတှငျပါရှိသော ရဓောတျ နှငျ့ သတ်တုဓာတျမြားက၊ အရပွေားခွောကျသှမှေု့ကို သကျသာလြော့နညျးစသေညျ့ အပွငျ ခန်ဓာကိုယျ၏ အရဓောတျထုပျလုပျမှုကိုလဲမြားစှာ အထော ကျအပံ့ပေးပါတယျ။အပူငွိမျးကာ ခန်ဓာကိုယျတှငျးကို အေးမွစလေို့၊ ပူပွငျးသော နှရောသီတှငျ မြားမြားစားပေးသငျ့ပါတယျ။ အသညျးကို လှနျစှာကောငျးကြိုးပွုပါတယျ။ ဗုံလုံသီးသညျ နှလုံးအားကောငျးစတေဲ့အတှကျ၊ နှလုံးဝဒေနာသညျမြား စားပေးသငျ့ပါ တယျ။ နှလုံးပုံမှနျ အလုပျမလုပျနိုငျခွငျးကွောငျ့နှလုံးခုနျမမှနျှတော့ဘဲ ရငျတုနျပနျးတုနျဖွဈလာ ပါက၊ ဗုံလုံရှကျ လတျလတျဆတျဆတျမြားကို အရညျညှဈပွီး စားပှဲတငျ ဇှနျး (၁)ဇှနျး မှ (၂)ဇှနျး အထိ တဈနလြေှ့ငျ ၃-ကွိမျ သောကျသုံးပေးရုံမြှဖွငျ့ နှလုံးကိုပွနျလညျ၍ ပုံမှနျ အလုပျ လုပျ လာစနေိုငျ၏။
ကိုယျပူအပွငျးဖြားနာခွငျးတို့အတှကျ ဗုံလုံသီး နှငျ့ အရှကျတို့က အသကျကယျဆေးကဲ့သအား ကိုးလောကျ ပါတယျ။ ဗုံလုံသီး နှငျ့အရှကျတို့ကို ကြိတျခြေ၍ ပြားရညျဖွငျ့ရောသောကျေ ပးပါက၊ ဖြားနာခွငျးကို ယူပဈသလို ပြောကျကငျးစေ ပါတယျ။ ထို့ပွငျဗုံလုံသီးအရှကျ နှငျ့နံနံပငျတို့ကို ၁၂ ဂရမျစီ ဆတူရော၍ ရအေေးထဲတှငျ တဈညစိမျထားပါ။ ထိုညသိပျ ရကေို အဖြားလုံးဝမကနြိုငျဘဲ အပွငျးဖြားနာနသေညျ့ ဝဒေနာသညျမြားကို ခန်ဓာကိုယျအနှံ့ လိမျးကြံပေးနိုငျပါတယျ ဗုံလုံသီးထဲတှငျပါရှိသော အမြှငျဓာတျမြားက ကလူးကို့ဈပမာဏကို ထိနျးသိမျးပေးနိုငျေ သာေ ကွာငျ့၊ ဆီးခြိုရောဂါ ကို ကစြပေါတယျ။ အထူးသဖွငျ့
တရုပျတိုငျးရငျးဆေးကုထုံးတှငျ ဗုံလံသီးပငျ၏အမွဈဖွငျ့ ဆီးခြိုရောဂါကို ကုသလရှေိ့ကွ ပါတယျ။ဗုံလုံရှကျကို နံနံစနှေ့ငျ့ရောကာ အပူပေးပွုတျထားသညျ့အရညျကိုတဈနလြေှ့ငျ (၃)ကွိမျ ခန်ဓာကိုယျအနှံ့လိမျးကြံပေး ခွငျးဖွငျ့ အသဲရောငျအသားဝါကို ကောငျးစှာကုသနိုငျပါတယျ။8. ဗုံလုံသီးတှငျ ရဓောတျပါဝငျမှုမြားသောကွောငျ့ ကယျလိုရီနဲသော ဟငျးသီးဟငျးရှကျဖွဈ ပါတယျ။ဒါ့အပွငျ ပွညျ့စုံလုံ လောကျသောအာဟာရမြားကို ဖွညျ့တငျးပေးနိုငျတာမို့ ခန်ဓာကိုယျ အလေးခြိနျထိနျးလိုသူမြားအတှကျ အထူးသငျ့တျောပါတယျ။ အမြှငျဓာတျကွှယျဝစှာပါရှိလို့အစာခစြေံနဈကို တိုးတကျကောငျးမှနျစပေါတယျ။ ဝမျးခြုပျွ ခငျး အတှကျ စိတျမညဈပါနှငျ့။ ဗုံလုံသီးသာမက၊ အရှကျ၊ အမွဈ နှငျ့ အစတေို့ကလဲ အူထဲတှငျေ ခြာဆီအဖွဈ စှမျးဆောငျပေးကာ၊ ဝမျးနူးစပေါတယျ။ လူကွီးဝမျးခြုပျခွငျးအတှကျ၊ ဗုံလုံရှကျ၊ အမွဈနှငျ့ အစတေို့ကို ညကျညကျဝါးစား ပေးနိုငျပါတယျ။
ကလေးငယျမြား ဝမျးခြုပျခွငျးအတှကျ၊ ဗုံလုံရှကျနှငျ့အစတေို့၏ သတ်တုရညျကို နံကျတိုငျး လကျဘကျ ရညျဇှနျး (၁)ဇှနျးစီ တိုကျကြှေးေ ပးခွငျးဖွငျ့ ဝမျးမှနျစပေါတယျ။ 10. ဦးရပွေားတှငျ မှိုစှဲ၍ဗောကျထသူမြားအတှကျ ဗုံလုံသီးသတ်တုရညျဖွငျ့ ဦးရပွေားကိုနှိပျနယျေ ပးခွ ငျးဖွငျ့ မိမိဖာသာ အိမျတှငျးဆေးမွီးတိုအဖွဈ ဗောကျမြားကငျးစငျအောငျကုသနိုငျပါတယျ။ ဗုံလုံရှကျသတ်တုရညျဖွငျ့ ဦးရပွေားကို လိမျးပေး ရုံမြှဖွငျ့ ထိပျပွောငျခွငျးကို
သကျသာလြော့နဲစပေါ တယျ ဗုံလုံသီးတို့သညျ ဆီးမြား၊ လသေကျစကော၊ ခန်ဓာကိုယျအတှငျးရှိ အဆိပျအတောကျမြား ကို နှငျထုတျပေးနိုငျစှမျးရှိပါ တယျ။အထူးသတိပွုရနျ – (က) ဗုံလုံစဟေ့ာ ဝမျးသကျစတောမှနျသောလဲ၊ ထိုအစထေဲ့တှငျ အဆီဓာတျပါဝငျမှုမွငျ့မားလို့ လှနျကဲစှာစားသုံးမိပါက အစာမကြေ ဗိုကျအောငျ့ခွငျးကို ဖွဈပျေါစပေါတယျ။( ခ) ဗုံလုံသီးပငျအမွဈဟာ ဝမျးသကျစလေို့၊ ကိုယျဝနျသညျမြား မစားသငျ့ပါဘူး။ အဆငျမသငျ့ရငျ သားပကျြ/သားလြော ဖွဈစေ ပါတယျ။( ဂ) ဗုံလုံသီးနဲ့ပီလောပီနံ တို့တှဲမစားသငျ့ပါဘူး။
အော့အနျတတျပါတယျ။မှတျခကျြ – ရငျ့သောဗုံလုံသီးမြားသညျ ခါးသကျသကျဖွဈကာ၊ အရသာလဲမရှိပါ။ ဒါကွောငျ့ လတျဆတျပွီး နုသောအသီးမြားကို အရှေးမမှား ဘို့လိုပါတယျ။ဗုံလုံသီးအပါအဝငျ ဟငျးသီးဟငျးရှကျ နှငျ့ သဈသီးဝလံ အားလုံးတိုငျးတို့တှငျ သဘာဝမှရရှိေ သာ ဆေးဘကျဝငျအစှမျး သတ်တိ ကိုယျစီပါရှိကွသဖွငျ့ လူသားတို့ကနျြးမာရေးကို မြားစှာအထော ကျအပံ့ဖွဈစပေါတယျ။ သို့သျော “တနျဆေး၊လှနျဘေး” ဆိုးရိုး စကားနှငျ့အညီ ဘေးမဖွဈေ အာငျတော့ အသုံးခတြတျဘို့လိုအပျပါတယျ။ ထို့ကွောငျ့ လူသားတို့ကနျြးမာရေးကို သဘာဝ ပဋိ ဇီဝဆေးအဖွဈ အထောကျအပံ့ပေးသညျ့ ဗုံလုံသီးကို အကြိုးရှိရှိအသုံးခကြာ စားသုံးနိုငျကွပါေ စကွောငျး သတငျးကောငျးပါး အပျပါသညျ။